प्रेममा रहेका भनिएका आकाश र पूजा सुटुक्क दुबई उडे, कति समय घुम्लान् एकान्तमा ? – Gazabkonews
प्रेममा रहेका भनिएका आकाश र पूजा सुटुक्क दुबई उडे, कति समय घुम्लान् एकान्तमा ?
काठमाडौँ । लोकप्रिय नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मा यतिबेला दुबई घुमघाममा ब्यस्त छन् । यो चर्चित जोडीले चलचित्र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’को छायांकनको अवसर पारेर दुबईमा घुम्ने योजना बनाएको हो । यो चलचित्रको केही दृश्य र गीतको छायांकनका लागि नायिका पूजा शर्मा, नायक आकाश श्रेष्ठ, सोनम तोप्देन, निर्देशक सुदर्शन थापा, कोरियोग्राफर कविराज गहतराज लगायतको टोली दुबई पुगेको बताइन्छ । चलचित्रको करिब २ सातासम्म दुबइका विभिन्न स्थानमा छायांकन हुने निर्माता सुर्दशन बताउँछन् ।
अब त छायांकन सकिन्छ होला नी भन्ने प्रश्नमा पूजाले भनिन्–‘अब त सकिन्छ । दर्शकले चाडै हेर्न पाउनुहुनेछ ।’ चलचित्रको छायांकन लण्डनको साथमा नेपालको मुस्ताङ र काठमाण्डौमा पनि गरिएको छ । यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति भदौमा तोकिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण चलचित्र रिलिज हुन सकेन । अब, यसको प्रदर्शन कहिले हुन्छ, अझै पक्का छैन ।
अभिनेत्री अनुपमासँग विवाह गर्दै क्रिकेटर जसप्रित बुमराह, को हुन् अनुपमा ? तस्वीरहरू हेर्नुहोस् : क्रिकेटर जसप्रित बुमराहले अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरनसँग विवाह गर्दैछन् । यद्यपि अहिलेसम्म यो विवाहको औपचारिक घोषणा भइसकेको छैन र विवाहको मिति पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अनुपमा दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हुन् । उनी मलायालम फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । यसबाहेक उनले तमिल, तेलुगु र कन्नड फिल्ममा पनि काम गरेकी छिन् । अनुपमाले २०१५ मा फिल्म प्रेममबाट डेब्यू गरेकी थिइन् । यो फिल्मका लागि उनले उत्कृष्ट डेब्यू अभिनेत्रीको पुरस्कार पनि पाएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी तेलुगु उद्योगमा आइन् र नागा चैतन्यासँग प्रेममकै तेलुगु संस्करणमा काम गरिन् । यसका अलावा उनले नितिनसँग फिल्म अ आ मा पनि काम गरिन् । तमिल सुपरस्टार धनुषसँग फिल्म कोडीमार्फत अनुपमाले तेलुगु डेब्यू गरिन् । २०१९ मा अनुपमाले नटसर्वाभोमाबाट कन्नड फिल्ममा डेब्यू गरिन् । २०२० मा उनले नेटफ्लिक्स फिल्म मनियारायिले अशोकनबाट डिजिटल डेब्यू गरिन् । रिपोर्टका अनुसार बुमराह र अनुपमाको विवाह यही हप्ता गोवामा हुन सक्छ । यी दुवैले एकैपटक कामबाट विदा लिएपछि उनीहरुको विवाहको चर्चा सुरु भएको थियो । बीसीसीआइले बुमराह केही समय विदामा रहने घोषणा गरेको केही दिनमै अनुपमाले पनि इन्स्टाग्राममा ‘ह्याप्पी होलिडे टु मी’ पोस्ट गरेकी थिइन् । यसअघि २०२० मा पनि बुमराह र अनुपमा साथमा रहेको चर्चा थियो । त्यतिबेला अनुपमाले आफूले बुमराह एक क्रिकेटर हुन् भन्ने बाहेक उनको बारेमा अरु थाहा नभएको र आफूले व्यक्तिगत रुपमा बुमराहलाई नचिन्ने बताएकी थिइन् ।